Dhowr qof oo lagu dilay toogasho ka dhacday magaalada Munich ee dalka Jarmalka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldDhowr qof oo lagu dilay toogasho ka dhacday magaalada Munich ee dalka Jarmalka
Booliiska Jarmalka. Sawirka: EPA.
Munich-(Puntland Mirror) Dhowr qof ayaa lagu dilay kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen toogasho ka dhacday xarun dukaamaysi oo ku taala magaalada Munich ee dalka Jarmalka, sida ay booliiska Jarmalka u sheegeen wakaalada wararka AP, iyagoo intaas ku daray dadkii danbiga sameeyay in ay wali booliiska ay ugaarsanayaan.
Xarunta uu weerarka ka dhacay ayaa la dhahaa “Olymia shopping centre”, taasoo ku taala galbeedka magaalada Munich.
Booliiska Jarmalka ayaa dadka ka codsaday in ay ka tagaan wadooyinka, sidoo kalena waxa ay ku amreen dadka dukaamaysanayay in aysan ka bixin goobta.
Cidina si dhaqso ah uma sheegan masuuliyada weerarkaas, balse wuxuu u egyahay kuwo hore oo kooxda ISIS ka geystay wadamada reer galbeedka.